Ny lamba an-trano tsara indrindra dia mampiasa mpanamboatra sy Pabrika PP Spunbond Nonwoven | Henghua
Ny lamba tsy tenona, fantatra koa amin'ny hoe lamba tsy tenona, dia vita amin'ny kofehy mifangaro na tsy mitongilana. Antsoina hoe lamba izy io noho ny fisehony sy ny toetrany sasany.
1.Ny tenona tsy tenona, fantatra koa amin'ny lamba tsy tenona, dia vita amin'ny kofehy mifangaro na tsy misy fangarony. Antsoina hoe lamba izy io noho ny fisehony sy ny toetrany sasany.
Ny lamba 2.Spunbond tsy tenona dia karazan-damba tsy tenona, izay vita amin'ny polypropylene ho toy ny akora, vita amin'ny polymerized ho harato amin'ny alàlan'ny sary avo lenta, ary avy eo dia nafatotra ho lamba amin'ny fihodinana mafana. Ny teknolojia lamba tsy tenona Spunbond dia ny manatsara hatrany ny fahaizan'ny tsipika famokarana ary mamaha ny olan'ny fitoviana amin'ny lamba tsy tenona, manarona, mahatsapa tanana, sns., Hanatsara ny tanjaka, ny fahalemem-panahy, ny fitoviana ary ny fampiononana an'ny spunbond non lamba roa: noho ny fizotrany tsotra, fivoahana lehibe ary tsy misy poizina ary tsy manimba ny vatan'olombelona, ​​dia be mpampiasa.
3. Tombontsoa amin'ny lamba tsy tenona spunbond: lanja maivana (mampiasa resin polypropylene ho akora fototra, hery misintona manokana 0,9, malefaka, fahatsapana tanana tsara); malefaka (misy kofehy madinidinika (2-3D) hazavana manjelanjelatra mifamatotra mamorona); manadio rano sy mifoka rivotra (ny volafotsy polypropylene dia tsy mandray rano, manana rano 0, ary ny vokatra vita dia manana famoahana rano tsara. Voafangaro amin'ny fibre 100% izy io ary misy porous ary mahazaka rivotra madio tsara. Mora ny mitazona ny lamba maina ary mora hosasana); tsy misy poizina, tsy misy poizina manorisory; mpiasan'ny bakteria sy anti-simika (polypropylene dia akora simika simika, tsy lanin'ny samoina, ary afaka mitoka-monina ny fikaohakan'ny bakteria sy ny bibikely ao anaty ranoka; ny fihanaky ny bakteria, ny alkaly, ny tanjaky ny vokatra vita dia tsy ho voan'ny erosion) ;
Ny lamba tsy tenona dia be mpampiasa amin'ny indostrian'ny filàna isan'andro. Izy ireo dia azo ampiasaina amin'ny karipetra sy lamba ifotony, fitaovana vita amin'ny rindrina, haingon-trano fanaka, lamba tsy misy vovoka, fonosana lohataona, lamba mitokana, lamba audio, lambam-pandriana sy lambam-baravarana, ambainy, haingon-trano hafa, lamba rovitra, lamba mamirapiratra mando sy maina, sivana lamba, aprona, kitapo fanadiovana, mop, napkin, lamba latabatra, lambam-baravarana, tsapa fanitsiana, cushion, fitafiana sns.
Teo aloha: Fonosana sy fonony mampiasa PP Spunbond Nonwoven
Manaraka: Ny fambolena dia mampiasa PP Spunbond Nonwoven
Lamba lamba lamba
Tselatra lamba tsy tenona
Lamba tsy vita tenona Polypropylene, Lamba tsy misy tenona polypropylene Spunbond, Lamba tsy tenona, Vidin'ny lamba lamba, Fitaovana tsy tenona, Pp lamba tsy tenona,